> Resource> iOS> Olee otú iji Hichapụ Photos on iOS effortlessly
Ọ dị mma. N'ihi ya, m dị nnọọ emelitere m iPod aka 4G ka iOS 6 na m na-amaghị na-enwe iCloud ga download niile m na foto site na kọmputa m na-iPod, na e nwere ugbu a 2500+ foto na iPod na m na-enweghị ohere maka music na ngwa. Olee otú m ihichapụ ha si m iPod?
Ọ bụ ụtọ n'ihi na ị nweta nkwalite gị iPhone, iPod ma ọ bụ iPad ka otu dabeere iOS 5, iOS 6, iOS 7, iOS 8 ma ọ bụ iOS 9. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị izute otu nsogbu dị ka onye ọrụ e kwuru n'elu ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ị na-echekwa ọtụtụ foto gị iPhone, iPod ma ọ bụ iPad, adịghị anya ị ga-aghọta na ihe ọtụtụ photos kpam kpam na-egbochi gị importing ọkacha mmasị gị music, videos, ngwa ọdịnala na ndị ọzọ na ekwentị gị, iPod ma ọ bụ iPad. Ọ bụrụ na a ikpe n'ezie na-eme, ị ga-chọrọ ka ihichapụ foto na iOS.
Apple nanị na-ahapụ gị ihichapụ Igwefoto Roll foto otu mgbe ọzọ. N'ihi ya, na-akwado na i nwere 2500 foto, ị nwere ka ihichapụ 2500 ugboro! Gịnị nnukwu ọrụ ọ bụ! N'eziokwu, mgbe nke a emee, ụzọ dị mfe n'ihi na ị bụ iji ihe iOS 5 Nhichapụ photos ngwá ọrụ. Ebe a, ga-amasị m ike ikwu na ị Wondershare TunesGo (Windows) ma ọ bụ Wonershare TunesGo (Mac). Ọ na-enyere gị ka ihichapụ multiple photos na igwefoto Roll, Photo Library ma ọ bụ albums kere site onwe gị.
Easy ụzọ wepụ iOS photos
Na-esonụ akụkụ, anyị ga-agwa gị otú ị ihichapụ foto na Windows version nke TunesGo. Ọ bụrụ na ị chọrọ ime na ọrụ na Mac version, ị nwere ike na-yiri nzọụkwụ.
Nzọụkwụ 1. Run a usoro na jikọọ na gị iPhone / iPod / iPad ka PC
Na mbụ, ibudata a iOS foto iwepụ ngwá ọrụ na kọmputa gị. Wee wụnye na ẹkedori ya. Jikọọ gị iPhone, iPod ma ọ bụ iPad gị na kọmputa site na eriri USB. Mgbe ejikọrọ, a usoro ga-chọpụta gị iPhone, iPod ma ọ bụ iPad-akpaghị aka, na mgbe ahụ na-egosipụta ya ke akpan window.
Cheta na: Otu ihe dị mkpa i kwesịrị icheta bụ iji wụnye iTunes na kọmputa gị n'ihu na-eji TunesGo.
Nzọụkwụ 2. iOS ihichapụ foto
Ka ihichapụ foto na iOS 5, iOS 6, iOS 7, iOS 8 ma ọ bụ iOS 9, ị kwesịrị ị na pịa "Photos" na ekpe ndekọ osisi iji bugote foto management window. Họrọ photos na ị chọrọ ka ihichapụ. Ebe a anyị na-ihichapụ photos na Photo Library dị ka ihe atụ. Mepee Photo Library na họrọ gị achọghị foto. Mgbe ahụ, pịa "Hichapụ". Nke a na usoro ga-amalite iji wepụ photos. Kara gị mma Akwụpụla gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod tupu foto mwepụ mechie.
Cheta na: TunesGo n'ụzọ zuru ezu-akwado ndị niile Apple ụdị na-agba ọsọ iOS 5, iOS 6, iOS 7, iOS 8 ma ọ bụ ndị ọhụrụ iOS 9, dị ka iPhone 5s / 5c, iPod aka 5 na iPad na Retina ngosi.
Ukwuu! I jisiri ihichapụ iOS 6 photos na nke a iOS 6 Nhichapụ foto ngwá ọrụ. Ugbu a, ị nwere ike nyefee songs, listi ọkpụkpọ na video gị iPhone, iPad na iPod na uche.
Download free nzọ ụkwụ version nke TunesGo!
Soro Video iji Hichapụ Photos on iOS